Mid ka mid ah hababka ugu fiican ee aad u hesho sugaya xirfadeed si aad videos waa ay ku daray Intro tayo wanaagsan iyaga, iyo ka dib Dhibaatooyinka ma aha sida dhib rajo sida muuqata, waxaad samayn kartaa intros qaar ka mid heer sare ah xirfad isticmaalaya xaqa ah aasaasiga ah ka dib Dhibaatooyinka presets iyo saamaynta.
Marka hore waxaan iska dhigay ilaa aannu ka kooban, waxaan ahay adigoo isticmaalaya 320x240 loogu talagalay ee wax soo saarka internetka laakiin haddii aad ku talo jirto adiga oo isticmaaleya isticmaale Intro aad YouTube channel tusaale ahaan, aad rabto in aad wax soo saarka tayo sare leh in kulan aad video files, inta badan dadka maalmahan in uu noqon doono 1080p.
Si taas waxaan ku dari lakabka adag oo isticmaalaya lakabka> New> adag , waxaan ka tagay anigaa Black laakiin waxaad dooran kartaa midab ku haboon baahidaada. On top of in aan ku daray layers qoraalka noo adigoo isticmaalaya button qoraalka ee menu ugu sareeya ula horyaalka, YouTube magaca channel ama la mid ah oo ku saabsan, lakabka u gaar ah eray kasta waxaan isticmaalaa si aan si madax-bannaan dubaridi kara, oo sidaas ugu dambeyntii waxaan heysanaa this.
Sida aad arki karto, waxaan heysanaa, iyo layers jeeda laba qoraalka, hal Erayga "Wonder 'waxa ku jira, mid la erayga' Share 'waxa ku jira. By garaacid qalab doorashada (arrow ee bidixda ah ee kore menu) aad jiidi karaan qoraalka si ay si hufan u dhig sida aad rabto. Halkaa marka ay marayso, waa in aad sidoo kale hubi in aad qoraalka waa midab fiican u waafaqayaan midkood bixiyo ururkiisa ama arrimo kale. Waxaan doonayaa inaan beddelo eray keliya in a midab buluug ah oo qoto dheer si ay u kala, Waxan aad samaysay aawadiis doorataa qoraalka oo la isticmaalayo qalab ee guddiga qoraalka u beddeli karo midabka. Our Mudanayaasha kama dambays ah Intro sidan u eg tan
2. Ku darista saamayn ugu horeysay
Sababta aan u tageen inay dhibaato ka qabo qoraalka on lakab oo kala duwan yahay sidaas darteed waxaan ugu yeelan karaan iyaga u muuqdaan waqtiyo kala duwan, waxaana doonayaa inaan qeyb ka ah weligeed ah inay ku yimaadaan labaad, si taas loo sameeyo waxaan jiidi lakabka weheliyaan waqtiga sidaa daraadeed waxa uu bilaabmaa ku ganaya 5 labaad.
Hadda dib u bilowga waqtiga inaan tago oo aan ka saameynta iyo horena tabs qaadan 'yahey oo jiidi gal daaha yaabku, Sidee baan waxan u soo celiyaan la lakabka share in la siiyo uu yahey mid fiican in labada qoraalka.
Waxaad la saldhig oo saamayn yahey in guddi saamaynta xagga bidixda toona si aad u hesho muuqaal aad ka dib waa ka ciyaari kara, iyo in waa hore saamayn sameeyo.
3. Ku darista in-guurka
Sida ay tahay Intro ah, ma aad rabto in aad koob ama magaca aad si uun u muuqdaan shaashada, iyo sidaas oo halkan mar kale aan u isticmaalno saamaynta gudahood ka dib Raadka. Muujinayo lakabka Wonder aanu ka dooro noo kala guurka. Waxaan soo gaaray CC Light tirtir sida aan jeclaan saamaynta, laakiin waxaad isku dayi kartaa kuwa kala duwan si aad u hesho aad ugu jeceshahay.
Iyadoo codsatay kala guurka si lakabka Waxaan hadda u baahan yihiin si ay u qabsadaan, waxaan doonayaa inaan kala guurka dhammayn sida qoraalka labaad u muuqataa ee sumadda 5 labaad. Sidaas daraaddeed waxaan u Jeediyey keyframe ugu horeysay ee ku-meelgaarka ah ee eber wakhti dhibic. Waxaan 100% u dhigay 'oo dhameystiran, qiimaha si erayga gebi ahaanba aan la arki karin bilowga, ka dibna u muuqataa ee 5 ilbiriqsi meesha aan dhigay keyframe labaad la qiimo ah oo dhameystiran oo ah 0%.
Tan waxaa muhiimad socda saamaynta ku badisay laakiin waxa ay weli shaqaynayso Indhahayga. Sida aynu ka arki kartaa, saamaynta dhameeyo jir ka hor ereyga labaad u muuqataa, laakiin ma doonayo in aan in uun arbushin ilaa, sidaas darteed waxaan doonaynaa in ay eegaan ku daray in saamayn aad u jiraan.
4. Kala-guurka labaad
Waxaad isticmaali kartaa saameyn la mid ah labada dabcan, waxaan doortay Miisaanka radial CC u tirtir, waxa kaliya saamayn waxaan ka heli mid ka farxiya. Waan ku daray in lakabka, ka dibna u dhigay 'dhamaystirka' 100% si loo hubiyo in aan la arki karin qoraalka ahaa oo wuxuu qotomiyey keyframe ugu horeysay ee halkaan.
Markaas ayaan u dhaqaaqay waqtiga on 3 ilbidhiqsi si ay calaamaddu labaad 8 iyo ku daray keyframe labaad iyadoo guurka dhamaystirka 0%, sidaas darteed ereyga si buuxda u arki karo.
5. howlgal Light
Si aad u buuxiso saamaynta, mar labada erayada ayaa u muuqday waxaan doonayay in lagu daro in barwaaqoobi kama dambays ah, oo halkan waxaan doortay saamaynta howlgal CC Light laga helay Raadka> Abuuri karo qaybta, waxaa jira dhowr inay isku dayaan, waxaan sida kaliya this mid ka mid ah.
In tab goobaha waxaan kulan midabka light in buluug aan qoraalka la isticmaalayo qalab eyedropper ah, oo wuxuu u yeelay dhowr keyframes si nuurka xaaqan agagaarka jir ah oo ka soo yaraaday. Nidaamku wuxuu yahay la mid ah sida keyframes kale, dejinta keyframe bilaawga ee kasta u yeelaan aad jeceshahay inaad bedesho, dhaqaaqin waqtiga, dejinta qiyamka soo socda iyo wixii la mid ah.
Xaaladdan oo kale ayaan jihada loo isticmaalo (si ay u soc jir ah), xaaqin xoojinta iyo xoojinta ku laayeen (labada dhimay si 0 dawlad gabaleedka Puntland ka soo saamaynta) sifo si aad u hesho muuqaal u eg ayaan dabadiisna waxaa jiray.
Waxaan bilaabay in aan iska by dejinta labada xoogga u yeelaa eber, si ay u muujiyaan aan lahaa inta lagu jiro kala-guurka ee qoraalka hore, ka dibna waxaan ku daray keyframes u jihada iyo goobaha xoojinta labada midig ee meesha text-guurka kama dambaysta ah uu dhamaado, taas oo keeni xoogga iyo sets jihada dogobka iftiin sida aan doonayo inaan u horeeyay, ka dibna 3 dura labaad waxaan dhigay keyframes u jihada si nuurka u safreysa oo dhan ku wareegsan shaashada, iyo keyframes final aan dib ugu dhimay xoojinta hoos u dhac labada howlgal iyo goobaha ku laayeen si saamaynta muhiimad way ka luntaa dhamaadka xigaan.
Taas macnaheedu waxa weeye in aan hadda ka hordhac fiican meesha u kala guurka erayada shaqsi ee iyo saamaynta iftiin u ciyaaro iyaga ku wareegsan.
Taasi waxay ahayd muddo gaaban ah oo wuxuu galay kaliya la isticmaalayo qalab laga helo meel heerka maktabadda Raadka ka dib, sida aan ka arki kartaa aan shaqo adag ku darto saamaynta xirfadle u intros aad videos, si fudud ayaan gaaray kala guurka iyo saamaynta waan ku dhaca sida, laakiin waxaa jira dad badan oo dheeraad ah ku jira id Raadka ka dib, kuwaas oo aan ahayn in ay dhadhan aad, haddii aadan hubin waxa ay qaar ka mid ah u eg oo aan haysan Bridge ku rakiban in ay oggolaadaan in xiisaha, si fudud iyagoo aad ku dartid lakabka oo dhex ah goob dhamaystirka si aad u aragto waxa ay qabato.
Haddii aad rabto in aad sii, waxaad ka iibsan kartaa kala duwan fur-tago badan si aad u codsato nooc saamayn kale, kacdo indhaha iyo baakadaha saamayn kale oo lagu dari karaa si fudud, ay ka shaqeeyaan sidii ay presets iyo saamaynta gudahood ka dib Dhibaatooyinka laftiisa iyo ballaarin karaan fursadaha aad leedahay.
Halkee ayaan ka daawan kartaa Romania TV Online?
Top 10 Intros Videos iyo Outros Rinjiga
> Resource > Video > Sida loo sameeyo Intro ah ka dib Raadka